Akaụntụ, Oditi, udtụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Akaụntụ, Audit, Ụtụ
Gwa m, biko, olee ọdịiche dị n'etiti ihe omume, akwụkwọ ọnụahịa na akwụkwọ ọnụahịa?
Biko, gwa m, olee ọdịiche dị n'etiti omume, akwụkwọ ọnụahịa na akwụkwọ ọnụahịa? Adiaha eze zara nke kachasị, mana gbasara akwụkwọ mposi - jọrọ njọ nke ukwuu .. akwụkwọ ọnụahịa bụ akwụkwọ na-ekwu ole maka ngwa ahịa / ọrụ ...
Kedu ihe ga-eme ka eze nweta ego? site na ihe atụ
Kedu ihe ga-eme ka eze nweta ego? na ihe atụ nke azụ azụ, ga-amasị m maka ndị ọzọ. Aghọtara m na ọ dịghị asọmpi dị na mpaghara a. N'eziokwu, ọ dịghị asọmpi n'ezie. ...
Gwa m, biko, ihe ga-abụ nkwụnye na nhazi akụkọ ahụ
Biko gwa m, kedu ụdị posta ga-eme na mkpesa mbido D71 K51 - enyere ego dịka ntinye akwụkwọ ntanetị D60 K71 - kwụrụ ụgwọ maka ngwongwo (ma ọ bụ ihe) na ndenye D10 (44) K60 - ngwongwo capitalized (ihe) ...
Nyefee onye nwe ahia ihe onwunwe
Ịnyefe ihe nke ngwaahịa ahụ nye onye na-azụ ihe Ebumnuche nke ịkwụsị azụmahịa ọ bụla maka ire ere bụ iji nweta ikike nke inwe ya na ike ịchụpụ ihe onwunwe a. Kedu oge mgbe onye na-azụ ahịa ga - esi nweta ikike nke onye nwe ya? ...
Ogologo oge ole ka ntinye akwụkwọ nkwụghachi ụtụ isi laghachiri?
Ogologo oge ole ka ntinye akwụkwọ nkwụghachi ụtụ isi laghachiri? A na-edepụta akwụkwọ ndebanye akwụkwọ ụtụ na mbipụta 2. Otu akwụkwọ na ụtụ isi, na nke abụọ ka gị na akara akara dịka ọbịbịa.
ụlọ ọrụ nyocha. Kedu ihe ụlọ ọrụ nyocha na-eme, gịnị bụ ọrụ ha?
ụlọ ọrụ nyocha. Kedu ihe ụlọ ọrụ nyocha na-eme, gịnị bụ ọrụ ha? http://akfpartner.ru/auditorskie-uslugi Enwere saịtị na-atọ ụtọ nke ị ga - achọta azịza ajụjụ gị na - achọ achọ ... Na saịtị a ị nwere ike ...
ịza ajụjụ ọnụ ajụjụ dị mfe nghọta
ajụjụ banyere ajụjụ ọnụ kọwaara ihe azụmahịa dị n'asụsụ dị mfe 1) Dt 62.02 Ct 62.01 - na 62.02 a na-atụbazinye ego (ọganihu), yana na 62.01 nnabata ndị ahịa. Emere eriri a site na ...
Kedu otu esi akwụ ụgwọ IP - ụtụ ego onwe onye? Kedu ihe kpatara eji atụle ụtụ mgbe ị ga-akwụ?
Kedu otu esi akwụ ụgwọ IP - ụtụ ego onwe onye? Kedu ihe kpatara eji atụle ụtụ mgbe ị ga-akwụ? Dị ka ọ dị na mmadụ niile - maka ndị ọrụ ọ dị mkpa idebe na ịnyefe na mmefu ego kwa ụbọchị ...
Kedu ihe akaụntụ kwekọrọ? Naanị asụsụ Russian.
Kedu ihe akaụntụ kwekọrọ? Naanị asụsụ Russian. Lyudmila Dmitrievna, ị kọwara ihe niile n'ụzọ doro anya, ekele gị! Ọ bụ ihe nwute na ị bụghị onye nkụzi m na-ahụ. aza ajụjụ na ulo akwukwo! Nkwurịta okwu nke mmadụ ...
kedu ihe bụ nzube nke ịchụ nta ego. O Mgbapụta uru nke Ịnye ọrụ na Nkwado ozi
kedu ihe bu nzube mbu ahia. o Uru o nyere ọrụ o Nkwado ozi Lee na Charter, maka ọgbakọ azụmahịa niile - uru, maka na-abụghị uru - iji rụpụta ebumnuche, ...
Ana m etinye akwụkwọ maka UTII mgbe ị debanyere SP?
Ana m etinye akwụkwọ maka UTII mgbe ị debanyere SP? Nyefee n'ime 5 ụbọchị mgbe ị debanyere aha ụtụ isi maka ngwa USN. Ma mgbe ị na-amalite ọrụ nke dara ...
Ihe Ndepụta Ngwaahịa bụ ...
Ihe Ndepụta Ngwaahịa bụ ... Kpamkpam 3 ihe eji eme ihe bu: 3. Nkọwa nke ezigbo ihe onwunwe na ụgwọ ego site na iji ha tụnyere data ịgụnye ego na ụbọchị a kapịrị ọnụ. ITEMS 1,2,3,4 "... 1. Iji hụ na…
ego a na-akwụ ụgwọ maka isi ego na-akwụ ụgwọ maka ego ha na-eme, olee otú iji chọpụta?
ego a na-akwụ ụgwọ maka isi ego na-akwụ ụgwọ maka ego ha na-eme, olee otú iji chọpụta? N'iji tụnyere ihe ngosi nke ntụgharị ego isi ego na-enye gị ohere ịchọpụta ọganihu ma ọ bụ nduzi ya. Ntọhapụ kpamkpam na-eme mgbe ọnụọgụ ugbu a dị ugbu a ...
Kedu otu esi achọpụta ego site na ire ngwaahịa? D-90, K-99
Kedu otu esi achọpụta ego site na ire ngwaahịa? D-90, K-99 Ihe nlereanya nke nyocha na ụtụ isi nke ire ere ngwaahịa. Nwepụta nke ngwaahịa ahụ gafere onye na-azụ ya n'oge a na-enyefe ya Debit ...
gwa m ihe bụ subconto?
Gwa m ihe bụ subconto? Nchịkọta. Dịka ọmụmaatụ, akaụntụ 10 - ihe, na ntụgharị nke subconto - ebuka, akụrụngwa, wdg. Subconto bụ ihe nyocha nke na-enye gị ohere ibelata akaụntụ dị ka ihe a na-amaghị na mbụ ...
Ego ole ka ịchọrọ maka ego iji mepee okpu na banyere ego ịzụta ihe?
Ego ole ka ịchọrọ maka ego iji mepee okpu na banyere ego ịzụta ihe? Enyi m gbaziri obere kiosk na Chelyabinsk. Imeghe ya were 100 puku rubles. mgbe ahụ ...
Gwa m, gịnị bụ ọdịiche dị n'agbata n'ùkwù na ụlọ ahịa?
Gwa m, gịnị bụ ọdịiche dị n'agbata n'ùkwù na ụlọ ahịa? Na onye ozu ahia. Na iwu nke echiche nke ahịa azụ ahịa abụghị. Enwere nkọwa na mkpọsa ahịa bụ ire ere-ịzụta ngwongwo maka oriri nke onwe ya. Ahịa bụ zụọ n'enweghị ihe mgbaru ọsọ nke njedebe ikpeazụ, na ...
Na ezumike ịkwụ ụgwọ NDFL? Kedu oge ịkwụ ụgwọ? Ezumike ga-abụ na nkwupụta maka ụgwọ ma ọ bụ
Na ezumike ịkwụ ụgwọ NDFL? Kedu oge ịkwụ ụgwọ? Ezumike ga-abụ na nkwupụta maka s / n ma ọ bụ NDFL na ezumike ezumike depụtara na oge issuance nke ezumike, ị nwere ike idepụta mmefu, ma ọ bụrụ na e nwere otu ...
Kedu ihe bụ ọnụahịa indicative?
Kedu ihe bụ ọnụahịa indicative? Poiboyu nke a mgbe ọnụahịa ahụ adịghị adị N'ihe gosiri na ọnụahịa bụ ụgwọ dị n'okpuru ebe a anaghị ere ngwaahịa a n'oge mbupụ.
Ndewo! Achọrọ m ịmata ihe ọrụ onye na-atụle ego na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, olee ọrụ m kwesịrị ime?
Ndewo! Achọrọ m ịmata ihe ọrụ onye na-atụle ego na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, olee ọrụ m kwesịrị ime? Ịme kaadị kaadị maka ịkwado ngwaahịa. Kama azụmahịa siri ike ma sie ike. N'eziokwu, ugbu a, e nwere ndị pụrụ iche ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,826.